Makiinada Shiida Sinsinta Oo maanta Lagu Wareejiayay Iskaashatada Far-yixasleey - Cakaara News
Makiinada Shiida Sinsinta Oo maanta Lagu Wareejiayay Iskaashatada Far-yixasleey
Mustaxiil( cakaaranews )Axad 3da April 2016, Gudiga Mashaariicda Degmada Mustaxiil Oo ah Gudi iskudhaf ah ayaa maanta Makiinada shiida sinsinta ku wareejiyay Iskaashatada Far-yixasley oo ah iskaashato danyar ah oo u dhashay degmada mustaxiil islamarkaana waxsoosaarleh.
Hadaba Gudoomiyaha Gudiga Mashaariicda ahna madaxa Xafiiska Maaliyada iyo Horumarnta Dhaqaalaha Degmada Mustaxiil Mudane Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in makiinadan ay tahay makiinada lagu shiido sinsinta islamarkana soosaarta saliida loo yaqaano macsarta. Waxuuna xusay masuulku in makiinadan ay soo gaday degmadu islamarkaana si sharci ah loogu wareejiayay iskaashatada faryixasley oo ah iskaashato danyar ah waxsoosaara leh una dhashay degmada mustaxiil.
Sidookale madax xafiiseedka oo hadalkiisii siiwata ayaa wuxuu sharaxaad kabixiyay in gudiga mashaariicdu uu yahay gudi iskudhaf ah islamarkaana kormeer iyo dabgal kusameeya dhamaan mashaariicaha bilow ilaa dhamaad isagoo tilmaamay in shalaynimo uu gudigu kormeer kusoo sameeyay dhamaan mashaariicaha degmada kasocda kuwaasoo laga kala wado Centarada iyo Tulooyinka hoosyimaada Degmada. Wuxuuna xusay in mashaariicaha intoodii badnayd ay dhamaystirmeen islamarkaana ay adeegii loogu talagalay bixinayaan.
Sikastaba ha ahaatee Wuxuu hadalkiisii ku gabagabeeyay in hadafka iyo himilada siyaasadeed ee wadanka u yaala uu yahay sidii looga bixi lahaa saboolnimda taasina ay udub-dhaxaad u tahay shaqo abuurka bulshada danyarta ah, waxaana lagama maarmaan ah in ka maamul ahaan ay doorkooda kasoobaxayaan kana soo bixi doonaan islamrkaana larabo in iskaashatooyinkuna ay kaalintooda kasoobaxaan.
Ugudanabayna xubnihii iskaashatada ahaa ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanayihiin makiinadan ay maanta ku wareejiyeen gudiga mashaariicda degmadu waxayna tillmaameen in wax-soo-saarkooda ay qayb laxaadleh kaqaadanayso. Waxayna u mahadceliyeen dhamaan maamulka degmada iyagoo carabka ku dhuftay in ay lagarab taaganyihiin hiil iyo hooba.